ကမ်ဘာပျေါတှငျကျွန်းများဘာတွေလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကွဲပြားခြားနားသော polyps ၏အရိုးစု၏သန္တာကျွန်း, ထိုကဲ့သို့သောသာအပူပိုင်းဒေသများတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။
အခုတော့အတု (လူလုပ်) ကျွန်း၏စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင် 250 000 စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသောကျွန်းများရှိသည်။ km - ဂရင်းလန်း၊ နယူးဂီနီ၊ Kalimantan၊
250 000 စတုရန်းကီလိုမီတာအထိရှိသည့်ကျွန်းများရှိသည်။ ၎င်းမှာဂရိတ်ဗြိတိန်၊ ဟွန်ရှူး၊ ဂျာဗား၊ ကျူးဘားနှင့်အခြားနိုင်ငံများဖြစ်သည်။
25 000 စတုရန်းကီလိုမီတာအထိBanရိယာများ - Bananal, Sardinia, Negros, Samar နှင့်အခြားသူများရှိသည်
5000 မှ 10 000 စတုရန်းကီလိုမီတာအထိကျွန်းများ၏isရိယာမှာ Buru၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ Corsica နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
1000 မှ 5000 စတုရန်းကီလိုမီတာအထိ Euboea နှင့် Rhodes ကျွန်းများရှိသည်
အကြီးဆုံးကျွန်းဂရင်းလန်းပါပဲ။ နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအီစတာကျွန်း Sakhalin ကျွန်းဒါဂတ်စကာ, ဟေတီ, ဟာဝိုင်ယီ, ဖိလစ်ပိုင်, အမော်လ်ဒိုက်, ဆေးရှဲ, ကိန္နရီကျွန်းများကဲ့သို့သောအခြားကျွန်းများ, ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အကြီးအမျိုးမျိုး။ သငျသညျဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမခေါ်ပါလျှင်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားစာရင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ကမ်ဘာပျေါတှငျကျွန်းစုသူတို့ထဲကအကြီးဆုံး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုကဒိန်းမတ်ပိုင်, ဂရင်းလန်းကျွန်းသည်။ ကျွန်းပြည်နယ်, ဒါ့အပြင်လည်းမရှိဒါဂတ်စကာအာဖရိက, ကျူးဘားအနီးတွင်တည်ရှိသည်ကဲ့သို့သောဖြစ်ပါသည်, ကိုလည်းကျွန်းများ၏အုပ်စုတစုဟာကိန္နရီကျွန်းစုဘဟားမားကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ကျွန်းများသမုဒ္ဒရာရှိပါတယ်, ကျွန်းများမြစ်ပေါ်တွင်ကျွန်းများရှိပါတယ်နှင့် ozrah အပေါ်ကျွန်းများရှိပါတယ်, ကမ်းလွန်ရှိပါတယ်။ ကြီးမားပြီးအလွန်သေးငယ်တဲ့ရှိပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး, Ceylon, ဥပမာ, ဒါမှမဟုတ်ဒါဂတ်စကာထားတဲ့အပေါ်ကျွန်းများရှိပါတယ်။
ဒီကျွန်းရေငုပ်သမားတွေနဲ့ပဲ holidaymakers များအတွက်အကြိုက်ဆုံးဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ် Musha Cay ကျွန်း, ကျွန်း, အဘဟားမား၏ကျွန်းစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အငြိမ့်နှစ်ဆယ်လူတွေမှတက်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးနိုင်သည်။ သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ် Villas အသီးအသီးပုဂ္ဂလိကဆိပ်ခံတံတားနှင့်တစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကကမ်းခြေဖြစ်ပါတယ်။
အလယ်ပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိကျွန်းများ၏ Palmyra Atoll (အင်္ဂလိပ် Edition ကို Palmyra Atoll) သန္တာသေးငယ်တဲ့အုပ်စုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1200-တောင်ဘက်ကီလိုမီတာဟာဝိုင်ယီ၏လိုင်းကျွန်းစုရေးစပ်။ အဆိုပါ atoll ၏နာမတော်ကိုနိုဝင်ဘာလ71802 နှစ်အတွင်းကဒီမှာသင်္ဘောပျက်တဲ့သူဗိုလ်ကြီး Soul အောက်မှာအမေရိကန်ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော Palmyra ၏ဂုဏ်အသရေရှိ၏။
Atoll Palmyra နှစ်ခုအတွင်းဂွအစွမ်းထက်သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား၏ 50 ကျွန်းများပါဝင်သည်။ ဗဟိုအနောက်, အရှေ့, အ Far East, မြောက်နှင့်တောင် Arch: ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ကျွန်း atoll6အုပ်စုများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အစွန်းရောက်အရှေ့ပိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏ဖွဲ့စည်းမှုမြုံကျွန်း (မြုံသောကျွန်း), ငယ်နှစ်ကျွန်းများစန္ဒီ (သဲကျွန်း) နှင့်ပင်မ (ပင်မကျွန်း) ၏အနောက်ပိုင်းအုပ်စုတွင်ကပ်လျက်သေးငယ်တဲ့ကျွန်းများနှင့်အတူရှိဗဟို Group သည် atoll Kaul (Kaula ကျွန်း၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ atoll ကျွန်းများလေကြောင်း (လေကြောင်းဆိုင်ရာကျွန်း), Kyuayl (ငုံးကျွန်း), Uaypporvill (Whippoorwill ကျွန်း) နှင့်အတော်ကြာသေးငယ်ကျွန်းများပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါဧရိယာပေါ်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးအရာ), မြောက်အမေရိက Arch ဖွဲ့စည်းခဲ့ကျွန်းများ Strayn (Strawn ကျွန်း), Cooper က (Cooper ကကျွန်း), အရှေ့အုပ်စုသည်အရှေ့ပိုင်းကျွန်းများပါဝင်သည် (အရှေ့ကျွန်း), ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး (Papala ကျွန်း) နှင့်ဝံပိုငှက် (ဝံပိုငှက်ကျွန်း), နှင့်ကျွန်းငှက် (Bird ကိုကျွန်း) ၏တောင်ပိုင်း, Hawley (Holei ကျွန်း), အင်ဂျင်နီယာ (ကျွန်း engineer), Tanager (Tanager ကျွန်း), အဏ္ဏဝါ (အဏ္ဏဝါကျွန်း) နှင့်ပရဒိသု (ပရဒိသုကျွန်း) ။
Palmyra ၏ atoll ၏စုစုပေါင်းဧရိယာအကြောင်းကို 12 စတုရန်းကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။
Palmyra Atoll ၏ပထဝီကိုသြဒီနိတ်: အတူ 55200 ။ w ။ 1620600 ဇ။ ဃ။
Atoll Bassas da အိန္ဒိယဥရောပကျွန်း၏အနောက်မြောက်ဘက်မှဒါဂတ်စကာ၏တောင်ပိုင်းမိုဇမ်ဘစ် Channel ကိုအနောက်ဘက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၏အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသောသေးငယ်တဲ့ကျွန်းများနှင့်ကျောက်ဆောင်များအုပ်စု (Bassas da အိန္ဒိယပြင်သစ်ဗားရှင်း) ။ Atoll နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Reef Baixa da အိန္ဒိယ (Baixo da အိန္ဒိယ) နှစ်အောက်ကသူ့ကတ်များအပေါ်သူ့ကိုလုပ်ကြံထားတဲ့ယင်း၏ကိုရှာဖှတှေ့ပေါ်တူဂီရေကြောင်း Gasper Gonzalez (Gaspero Gonsuales), ကနေ၎င်း၏အမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ 1511 အတွက်မြေပုံ Pilestirina (Pilestrina) တွင် atoll ဟင်နရီ II ကိုမြေပုံ (ရန်, မြေပုံများ Diego မှ Ribero (Diego မှ Ribero) ရက်နေ့မှာ Bajocian da အိန္ဒိယ (Bayos da Indya) အဖြစ်ရက်စွဲပါ 1529 တစ်နှစ် Boksos de la အိန္ဒိယ (Baxos de la အိန္ဒိယ) designated မြေပုံများအား Mannevilett (Mannevilette) 1542 နှစ်ပေါင်း Zhuiv ဘေ့ (Bass Juive) ရက်တွင် Atlas အတွက် 1588 နှစ်) Bass ဂျူဒီ (Bass က de Judy), Sanuto (Sanuto) 1770 နှစ်ပေါင်း Sirtes အိန္ဒိယ (Syrtes အင်ဒီ), ။ သာမြေပုံ 1825 အတွက်ပျံ့နှံ့ရာနယ်မြေဆိုတာဟာ Owen (Britannique Owen) ရက်နေ့တွင်, atoll လက်ရှိအမည်ကိုအောက်တွင် designated ခဲ့သည်။ Bassas စကားလုံးအဖြစ်အနိမ့်သို့မဟုတ်ရေအောက် Russian သို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့် atoll Bassas da အိန္ဒိယ၏နာမကိုအိန္ဒိယဖို့လမ်းအပေါ်အနိမ့်သို့မဟုတ်ကျောက်တန်းဆိုလိုနိုင်ပါ။
212857 ကြိမ်မြောက်: Atoll Bassas da အိန္ဒိယပထဝီကိုသြဒီနိတ်ရှိပါတယ်။ မီတာ။ အတွက် 394019 ။ ဃ။
အနိမ့်ဒီရေမှာရေအထက်မြင့်တက်လာရသောပွညျကို Bassas da အိန္ဒိယ atoll ကျွန်းများ၏ဧရိယာ 0,2 စတုရန်းကီလိုမီတာထက်မပိုပါဘူး။ ဒါဟာအတွင်းဂွနှင့်ပြင်ကျောက်တန်းအပါအဝင် atoll ၏တစ်ခုလုံးကိုဧရိယာ, 80 စတုရန်းကီလိုမီတာထက်ကျော်လွန်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။
ကမ်ဘာပျေါတှငျအလုံအလောက်ရှိပါတယ် ကျွန်းများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်။ သူတို့ထဲကတချို့၏အမည်များကိုစာရင်းပြုစု:
3. မော်လ်ဒိုက်။ ဒါကဖြစ်ကောင်းအများအပြား၏အိပ်မက်သွားရောက်ရှိရာအလှဆုံးကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။
5. Rhode Island ။
20 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,629 စက္ကန့်ကျော် Generate ။